/ब्लग/ग्यालरी/12 चरणहरूमा स्टेरियोड्स पाउडर आपूर्तिकर्ता कसरी छनौट गर्ने?
प्रकाशित 04 / 23 / 2019 by Dr. Patrick Young मा लेखियो ग्यालरी.
स्टेरॉइड पाउडरको बारेमा धेरै कुरा
1। स्टेरियोड्स पाउडर आपूर्तिकर्ताहरुमा प्रवर्धन
2। 11 चरणहरूमा स्टेरियोड्स पाउडर आपूर्तिकर्ता कसरी छनौट गर्ने?
चरण 1: स्टेरियोड्स पाउडरका लागि सक्षम आपूर्तिकर्ताहरूको सूची पहिचान गर्दै
चरण 2: आपूर्तिकर्ताहरूको आपूर्ति प्रदर्शनको अडिट गर्नुहोस्
चरण 3: स्टेरॉइड पाउडर सप्लायरको बारे थप प्रश्नहरू सोध्नुहोस् वा प्रश्नहरू अन्वेषण गरेर आत्म-मूल्याङ्कन प्रश्नावली लिनुहोस्।
चरण 4: स्टेरियोड्स पाउडर आपूर्तिकर्ता को मा के मा विशेषज्ञता को बारे मा अनुसन्धान
चरण 5: कम्पनीको ग्राहक हेरविचार टोली को प्रतिक्रियाशीलताको जाँच गर्नुहोस्
चरण 6: समीक्षा, प्रशंसापत्र र ग्राहक प्रतिक्रियालाई इन्टरनेटबाट हेर्नुहोस्
चरण 7: स्टेरॉयड पाउडर को मूल्यहरु तुलना गर्नुहोस्
चरण 8: कागजात समर्थन
चरण 9: वितरण र प्याकेज विधि
चरण 10: ट्र्याकिङ नम्बर
चरण 11: भुक्तान विधि
चरण 12: कम्पनीको अन्य विवरणहरू जाँच गर्नुहोस्
Iस्टेरियोड्स पाउडर आपूर्तिकर्ताहरुमा ntroduction
स्टेरियोड पाउडर आपूर्तिकर्ताहरू निर्माताहरू वा आपूर्तिकर्ताहरू हुन् जुन तपाईले मौखिक, injectables र सबै अन्य ढाँचाहरू सहितका विभिन्न प्रकार को स्टेरियोड्स पाउडर बेच्न सक्नुहुन्छ, यानी कागज वा मेच। त्यहाँ हजारौँ औषधि कम्पनीहरू र भूमिगत प्रयोगशालाहरू छन् जुन स्टेरियोड्स पाउडर स्टक र बेच्न सक्छन्।
यो कुनै प्रश्न हो कि आज धेरै व्यक्तिहरूले पहिले भन्दा भन्दा स्टेरियोड्स प्रयोग गर्दै छन्। कुनै आश्चर्य नगर्ने अधिक स्टेरॉइड आपूर्तिकर्ताहरूले उनीहरूलाई उच्च मागसँग मेल खान खोज्दैछन्। पहिले, एक चयन एकदम एक कार्य थिएन किनभने तिनीहरू धेरै थिएनन् तर आजकल तपाइँ एकै छान्नुको लागी तपाईलाई धेरै सावधान हुनु पर्छ।
स्टेरियोड्स पाउडर सप्लायर तपाईले रोज्नु भएको छ कि तपाइँले सेट गर्नुभएको लक्ष्यहरू प्राप्त गर्दछन् वा होइन। तपाईं गलत आपूर्तिकर्ता चयन गर्नुहुन्छ, र तपाईं धेरै पैसा र समय बर्बाद गर्न सक्नुहुन्छ।
म भन्न चाहन्छु कि दायाँ आपूर्तिकर्तालाई एक आवश्यक भाग हो भने यदि स्टेरियोड्स खरिद गर्ने योजना हो। यही कारणले यो यो सुनिश्चित गर्दछ कि आपूर्तिकर्ता तपाईले छनौट गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईंको आदर्श गुणस्तरको मानक र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा सही मूल्यमा समय समयमा।
वास्तवमा, उत्तम स्टेरियोड्स पाउडर आपूर्तिकर्ता छान्नु समय-उपभोग र बिस्तारै जटिल छ। धेरै मानिसहरू कला महसुस गर्नु अघि छोडेर यसैले कमको लागि निपटने अन्त। आज, हामी राम्रो बिक्रेताहरू पहिचान गर्न प्रयोग गर्न मुख्य बिन्दुहरू र उपकरणहरूमा डुङ्गा गर्नेछौं, उनीहरूलाई एकअर्कालाई तुलना गर्नुहोस् र अन्तमा सर्वोत्तम आपूर्तिकर्ता चयन गर्नुहोस् जुन तपाईं भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, चल्न सुरु गरौं!
चरण 1: स्टेरॉइड को लागि सक्षम आपूर्तिकर्ताहरु को एक सूची को पहिचानs पाउडर
पहिलो चरणले सम्भव स्टेरियोड पाउडर आपूर्तिकर्ताहरूको सूची तल राखिरहेको छ। तपाईं उपयुक्त आपूर्तिकर्ताहरू कसरी जान्नुहुन्छ? स्टेरियोड फिल्डमा आपूर्तिकर्ताहरू फेला पार्नका लागि थुप्रै स्रोतहरू छन्। उदाहरणका लागि, त्यहाँ विभिन्न सहभागीहरू छन् जुन तपाईं सहित एक प्रतिक्रिया खोज्न सक्नुहुनेछ;
निर्माताहरू- तपाईंले स्टेरॉइड निर्माताहरू तपाईलाई थाहा पाउन सक्नुहुनेछ र तपाइँलाई सम्पर्क गर्न सक्ने कम्पनीहरूको एक सूची पठाउन अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ। नतीजा, यसले तपाईसँग व्यवसाय गर्न सक्ने सबै भन्दा राम्रो फेला पार्न मद्दत गर्नेछ।
प्रदर्शनी- यो सजिलो स्थान हो जुन तपाईले आपूर्तिकर्ताहरूको सूची प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ किनभने यो एउटी क्षेत्रमा उनीहरूको ठूलो संख्या हो। प्रदर्शनीमा जानुअघि, यो सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले प्रदर्शनीहरूको सूचीमा हेरिरहनु भएको छ जुन तपाइँका आवश्यकताहरु भित्र पछाडी रहेका छन्।
व्यापार सल्लाहकारहरू- तपाई सम्भवतः राष्ट्रिय वा स्थानीय संघहरूमा आबद्ध हुनुहुन्छ जुन कारोबारको समर्थन गर्दछ। यस्तो उदाहरण को वाणिज्य कक्षहरु छ।
व्यापार प्रेसप्राय: व्यापारिक पत्रिकाहरूले आपूर्तिकर्ताहरूको विज्ञापनहरूको लागि ठाउँ प्रस्ताव गर्दछ। धन्यबाद, त्यहाँ त्यहाँ छन् कि विशेष व्यापारहरूमा विशेषज्ञ छ ताकि तपाईं निर्माण निर्माण पत्रिकामा स्टेरॉयड आपूर्तिकर्ताहरूको सूची खोज्न सक्नुहुन्न।
गुगल- यो एक सजिलो स्थान हो जहाँ तपाईं एक विशिष्ट उत्पादन जस्तै आफ्नो सटीक आवश्यकताहरु को आधारमा आपूर्तिकर्ताहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, र धेरै र अधिक। यदि तपाईं चाहानुहुन्छ सटीक स्टेरॉइड जान्नुहुन्छ भने, तपाईं "स्टेरॉइड एक्स को लागि सप्लायरहरू खोज्न सक्नुहुनेछ।"
यसबाट, तपाईं पिकरियर र छोटो सूचीको साथ आउन सक्नुहुन्छ। तपाईंले जाँच गर्न चाहानुहुन्छ जुन कुन कुराको गहिरो खोजको योग्य छ र तपाईका आवश्यकताहरु को लागी अधिक बक्सहरुलाई टिक्न लगाउनु हुन्छ। व्यक्तिगत रूपमा सबै संभावित आपूर्तिकर्ताहरू हेर्दा तपाईलाई छोड्नुभएका कम विकल्पहरूमा छक्क पर्नेछ।
सही सप्लायर पहिचान गर्न यो मद्दत कसरी हुनेछ? यो प्रतिस्पर्धा कम गर्न मद्दत गर्दछ, र अब तपाईंसँग उत्कृष्ट स्टेरियोड पाउडर सप्लायर छनौट गर्ने एक उच्च मौका छ। साथै, अन्तिम निर्णय गर्न अब धेरै प्रयास गर्न सक्दैन।
लेखा परीक्षाले ट्रयाक हेर्नको लागि समय समयमा थप आपूर्तिकर्ता प्रदर्शन को माप र विश्लेषण गर्नमा प्रवेश गर्दछ र कुनै पनि जोखिम कम। गरेर गरेर, तपाईं उत्कृष्ट सेवाहरू राखेका छनौट गर्ने र प्रदर्शन गर्नेहरूलाई हटाउन सक्नुहुनेछ।
थप रूपमा, तपाईं पुष्टि गर्न सक्नुहुनेछ कि सम्भावित आपूर्तिकर्ताले कुनै महत्त्वपूर्ण प्रणाली विफलता छैन जुन उत्पादनको गुणस्तरलाई असर पार्न सक्छ। यसले व्यक्तिगत आपूर्तिकर्ता बल र कमजोरीहरुलाई बुझ्न मद्दत गर्न सक्नु अघि जसलाई निर्णय गर्न को लागी।
आपूर्तिकर्ताओं को प्रदर्शन को लेखा परीक्षा को अनुबंध मा हस्ताक्षर पछि रोक नहीं; यो व्यापार विकासको लागि महत्वपूर्ण छ। यसैले यो तपाईंलाई महत्वपूर्ण पाउडर आपूर्तिकर्ताहरूमा उच्च फोकस राख्न अनुमति दिन्छ जुन दोस्रो-स्तरीय आपूर्तिकर्ताहरू पनि निगरानी गर्दा उच्च सोच हुन्छ। एक आपूर्तिकर्ता जसले बलियो प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएको छ तपाईंको सम्भावनाको लागि तपाईलाई सुचारु संचालन र मुनाफा प्रदान गर्न सम्भव छ। ती व्यक्तिहरूले नकारात्मक प्रवृति पाएका छन् तपाईले एक टाउको दुखाइ समाप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईं निश्चित जानकारीको बारेमा सम्भावित आपूर्तिकर्ताहरूमा थप विवरणहरू लिन सक्नुहुन्छ। यस अवस्थामा, तपाइँ स्व-मूल्याङ्कन प्रश्नावली उत्पन्न गर्न सक्नुहुनेछ जहाँ आपूर्तिकर्ताहरूले तपाइँसँग हुन सक्ने प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्दछ। यसको माध्यमबाट, तपाईं प्रदर्शन अंतरालहरू पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ साथै जान्छ कि आपूर्तिकर्ताले यसको सञ्चालन कसरी बुझ्दछ।
तपाईंले बन्द र खुला-समाप्त प्रश्नहरू समावेश गर्न छनौट गर्न सक्नुहुनेछ ताकि आपूर्तिकर्ताहरूले तपाईंलाई व्याख्या गर्न सक्दछन् कि उनी विभिन्न क्षेत्रमा कसरी काम गर्छन्। यसले ईमानदारीको प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्नेछ किनभने तिनीहरूसँग सबै प्रश्नहरूको जवाफ छैन।
चरण 4: स्टेरॉइड को बारे मा अनुसन्धानs पाउडर आपूर्तिकर्ता मा माहिर।
हरेक सप्लायर सबै व्यापारहरूको एक ज्याक होईन। केहि कच्चा स्टेरियोड्स को आपूर्ति गर्छन जब अन्य समाप्त मा विशेषज्ञता छ। अन्यले केहि स्टेरियोड्स प्रदान गर्न सक्दछन् र अरूलाई हुन सक्दैन। यो स्पष्ट लाग्न सक्छ, तर विचारमा राख्नु आवश्यक छ पहिले तपाईको आवश्यकतालाई थाहा छ। तपाईलाई विशिष्ट हुनुपर्दछ जब तपाईं किन्न चाहनुहुन्छ भनेर पहिचान गर्न आवश्यक छ।
अब तपाईं सान्दर्भिक आपूर्तिकर्ताले तपाईको आवश्यकताहरु लाई उचित रुपमा पूरा गर्न सक्नुहुनेछ। उदाहरणका लागि, केवल किनकी एक आपूर्तिकर्ताले बेच्न बेच्नका लागि डेकले भनेको होइन कि उनीहरूले तपाईंलाई आपूर्ति गर्न सक्दछन् डेका कच्चा पाउडर.
यदि तपाईं सँग धेरै उत्पादनहरू छन् भने, तपाईं धेरै आपूर्तिकर्ताहरू छनौट गर्न सक्नुहुनेछ जसले तपाईंलाई आवश्यक सबै स्टेरियोड्स प्रदान गर्न सक्छ।
चरण 5: कम्पनीको ग्राहक हेरविचार टोली को प्रतिक्रियाशीलताको जाँच गर्नुहोस्।
ग्राहक सेवा एक सप्लायरबाट अर्कोलाई भिन्न हुन्छ, तर आवश्यक विशेषताहरूले सबै प्रश्नहरूको जवाफ दिन्छन्, समस्याहरूको समाधान प्रस्ताव, द्रुत प्रतिक्रिया प्रदान गर्न र पहुँचयोग्य ग्राहक सेवा गर्न समावेश गर्दछ।
ग्राहक सेवाको मूल्यांकन गर्ने कि आपूर्तिकर्ताहरू उपलब्ध गराउन महत्त्वपूर्ण छ। यो इन्जिनमा धेरै तेल छ। जब त्यहाँ त्यहाँ छ, इन्जिन भन्दा धेरै सम्भवतः तपाईले अप्रिय अनुभव हुन सक्नुहुनेछ जब सम्म यो बिना अप्रिय अनुभव हुन सक्छ। यदि आपूर्तिकर्ताले दयालु प्रतिक्रिया गरेको छ भने, त्यसपछि उनी आफ्नो व्यवसायको बारेमा गम्भीर छैन र उहाँसँग ट्राफिक गर्न सजिलो नहुन सक्छ।
यदि तपाईंलाई महसुस गर्नुहुन्छ भने तपाईंलाई मधुमेहमा सम्पर्क गर्न आवश्यक पर्दछ त्यसपछि तपाईलाई यो ध्यान राख्नु पर्छ। एक आपूर्तिकर्ताको लागि जानुहोस् जसको ग्राहक सेवा हेरविचार टोलीले प्रतिक्रिया दिन लामो लाग्दैन र जुन उपलब्ध छ 24 / 7। यो तरिका तपाईं सधैं आफ्नो व्यापार आवश्यकताको सर्तमा एकै पृष्ठमा हुनेछ। तपाईंको चिन्तालाई सम्बोधन गरी तपाईंलाई थाहा छ कि तपाईलाई के थाहा छ; एक सफल साझेदारीको निर्माण गरिनेछ।
यसको अतिरिक्त, यदि कम्पनीसँग एक विश्वसनीय, द्रुत र उत्तरदायी ग्राहकको हेरविचार छ भने, कम्पनीको वैध संभावनाहरू छन्। यदि तपाईंलाई महसुस गर्नुहुन्छ भने एक विशेष कम्पनीको ग्राहक सेवा कुञ्जी खराब छन्, अर्कोमा जानुहोस् र उनीहरूलाई सम्भावित ग्राहकको रूपमा व्यवहार गर्ने तरिकाबाट निर्णय गर्नुहोस्।
चरण 6: समीक्षा, प्रशंसापत्र र ग्राहक प्रतिक्रियालाई इन्टरनेटबाट हेर्नुहोस्।
विभिन्न आपूर्तिकर्ताहरूको प्रतिष्ठा जाँच गर्दै आवश्यक कदमहरू मध्ये एक हो जुन एक पटक छोड्नुभयो अफसोस हुन सक्छ। यो ग्राहकलाई प्रतिक्रिया दिइयो अनलाइन द्वारा प्राप्त गरी। ग्राहकको विचारले तपाईंलाई बताउँछ कि तिनीहरू सेवासँग सन्तुष्ट छन् वा छैन।
आपूर्तिकर्ताको सेवाहरूको सन्दर्भमा समीक्षाहरू र प्रशंसापत्रहरू खोज्दा तपाईंलाई सहयोग गर्ने निर्णयको स्पष्ट बुझ्न मद्दत गर्नेछ यदि तपाईं तिनीहरूको साथ ट्राफिक गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने। तपाईं पनि स्टेरॉयडहरू प्रदान गर्न कति समय लिन सक्नुहुन्छ र तिनीहरूले पछिल्ला बिक्री सेवा प्रदान गर्न सक्दछन्।
एक कम्पनी जसले बलियो प्रतिष्ठामा उच्च गुणवत्ताको उत्पादनहरू साथै आफ्ना क्लाइन्टहरू कसरी व्यवहार गर्ने कौशलहरूसँग सम्भव छ। थप रूपमा, यदि त्यहाँ धेरै नकारात्मक समीक्षा र उजुरी छ भने, यो कम्पनी कानूनी होइन। केहि नकारात्मकहरू खराब हुँदैनन्; तपाईलाई जाँच्नु भएको छ कि आपूर्तिकर्ताले कसरी मुद्दा उठाएको छ।
जब मूल्यमा आउँछ, तल्लो तह तपाइँको उच्च प्राथमिकता हुन सक्छ। तथापि, तपाईंको मुख्य लक्ष्य उच्च गुणवत्ता वाला उत्पादहरू को सही मात्रा मा हो र सस्तो स्टेरियोड्स कि कुनै पनि लाभ प्रदान नहीं गर्न सक्छ। एक हास्यास्पद कम मूल्य एक सूचक हुन सक्छ कि कम्पनी त्यहाँ तपाईंलाई धोका दिने हुन सक्छ।
यदि तपाईंसँग विश्वास छ भने उच्च गुणवत्ता को स्टेरियोड्स र लागत तपाईँले प्राप्त गर्नु भन्दा सस्तो विकल्पहरू भन्दा बढी छ, अगाडी जानुहोस् र सम्भव भए यसलाई खरीद गर्नुहोस्। यद्यपि मूल्य अझ उच्च हुनुपर्दछ; यो राम्रो तरिकाले आफ्नो बजेट मा फिट गर्नु पर्छ।
के तपाई मान्नुहुन्छ कि गुणस्तर मानक कागजातले आपूर्तिकर्ताले तपाईंको सम्बन्धलाई असर गर्न सक्छ? यो एक आधारभूत नियम हो कि कुनै आपूर्तिकर्ताले उचित रेकर्डहरू राख्नुपर्छ र यसबाट यो यसले तपाईंको र तपाईंको व्यवसायलाई सुरक्षित गर्दछ। जाँच्ने हो कि आपूर्तिकर्ताले वैध इजाजतपत्र छ भनेर तपाईंलाई मद्दत गर्दछ कि तपाइँ वैधानिक रूपमा काम गर्ने कारखानासँग काम गर्दै हुनुहुन्छ।
यसबाहेक, यसले आपूर्तिकर्ताले कसरी सञ्चालन गर्ने विस्तृत विवरणको निर्माण गर्दछ। यो सम्भावित आपूर्तिकर्ताहरूको लागि अनुरोध गर्न एक राम्रो विचार हो प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्टजस्तै एचपीएलसी, एनएमआर, कोए (विश्लेषणको प्रमाणपत्र), र जीएमपी (शुभ विनिर्माण अभ्यास) जस्ता प्रमाणपत्रहरू। यो कागजातले तपाईँलाई थाहा छ कि स्टेरियोड उत्पादन गरी निर्मित र गुणस्तरको स्तरमा नियन्त्रण गरिन्छ।
कहिलेकाँही तपाईंसँग कुनै विशेष आपूर्तिकर्ताको उत्पादनको प्रमाणिकरण गर्न कारखानामा यात्रा गर्ने समय नहुन सक्छ। यदि त्यसो भए, तपाईले उनीहरूलाई उनीहरूको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पठाउन सक्नुहुनेछ। स्पष्ट प्रमाण पछि कि आपूर्तिकर्ता कानून संग अनुपालन एक उत्कृष्ट आपूर्तिकर्ता को एक आवश्यक विशेषता हो।
तपाइँको वस्तु कसरी प्याकेज गरिएको छ, र वितरणको विधिले निर्धारण गर्दछ कि तपाइँ यसलाई एक टुक्रामा पाउनुहुन्छ कि। दोषपूर्ण उत्पादनहरू प्राप्त गर्ने जुन प्रतिस्थापनको आवश्यकता हुन्छ हरेक समय व्यस्त र समय-उपभोग हुन सक्छ। यो ध्यान दिनु राम्रो छ कि विश्वसनीय र समयको डेलिभरी तपाईंको व्यापार सफलताको प्रवर्द्धनमा एक लामो तरिकामा जान्छ।
स्टेरियोड पाउडर आपूर्तिकर्ता चयन गर्नु अघि, तपाईंले डिलिवरी मितिको सन्दर्भमा उनीहरूको ध्यान र पूर्तिलाई जाँच गर्नुपर्छ। दायाँ आपूर्तिकर्ताले तपाइँको प्याकेज पठाउनु र 24 घण्टा भन्दा कम लिनेछ र यो सम्भव छ कि यो सबै भन्दा कम समय सम्भव भएमा तपाईंको गन्तव्यमा पुग्छ।
एक विश्वसनीय स्टेरियोड पाउडर आपूर्तिकर्ता भएकोले तपाईंलाई आफ्नो स्टक व्यवस्थापन गर्न र ग्राहकहरु को लागि डिलीवरी र प्रतीक्षा समय सम्बन्धी अपेक्षाहरु लाई पनि सेट गर्न दिनेछ।
तपाईंको आदर्श स्टेरॉइड आपूर्तिकर्ताले सबैभन्दा सुन्दर प्याकेजिङ्ग डिजाइनको प्रस्तावमा एक पुरस्कार जित्न सक्दैन, तर यो कुनै पनि प्रकारको क्षतिबाट वस्तुहरूको रक्षा गर्न पर्याप्त बलियो हुनुपर्छ।
केही आपूर्तिकर्ताहरूले निःशुल्क लागत शिपिंग प्रयोग गर्दा अरूले साइजको अनुसार चार्ज, यात्राको दूरी र वजन। सबै आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्नुहोस् जुन तपाइँले कुनैपनि लुकाइएका लागतहरूबाट बच्नको लागी खर्च गर्न सक्नुहुनेछ।
एक ट्रयाकिङ नम्बर कोड प्रदान गरिन्छ एक पटक जब तपाइँ प्यानलमा पठाइएको थियो जब तपाइँ आफ्नो प्याकेजलाई तपाइँको शिपिंग ठेगानामा पुग्नुभएको छ। साथै, तपाईं क्यारियर जानकारी साथै वस्तुहरू वर्तमान स्थान हेर्न सक्नुहुन्छ।
एक आपूर्तिकर्ता जसले तपाईंलाई ट्र्याकिङ जानकारी प्रदान गर्दछ, तपाईंलाई अधिक भरोसा दिन्छ कि प्याकेज तपाईंलाई पुग्दछ। अन्यलाई डिलिवरी गर्नु अघि तपाईंले प्याकेज फोटो पठाउनुभन्दासम्म जान्छ। यसले तपाईंलाई हानिकारक वा क्षतिको कारणले गर्दा यो प्राप्त नगरेमा हानिबाट जोगाउँछ। एक आपूर्तिकर्ताको साथ ट्रांजिङले तपाईंलाई समग्र खरीद अनुभव अनुभव गर्न मद्दत गर्दछ।
यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईले तपाइँको सम्भावक सप्लायर पेश गर्ने भुक्तानी विधिहरू विचार गर्नुहुन्छ। प्रदान गरिएको भुक्तान विधि तपाईंको स्थानमा विश्वसनीय र उपलब्ध हुनुपर्छ।
आज, बिटकोइन र डिजिटल मुद्राहरू अधिक लोकप्रिय हुँदैछन्। तिनीहरू धेरै गुनासोहरू आउँछन् किनभने उनीहरूले गुमनाम रूपमा तिर्न अनुमति दिन्छन्। किनकि तिनीहरूले स्वचालित रूपमा लेनदेनको रेकर्ड गर्दैनन्, तपाइँ अधिक गोपनीयताको आनन्द लिनु हुन्छ।
केहि भुक्तानी विधिहरू जस्तै नकदीले अन्य भन्दा बढी जोखिम पाउँछ जबकि अन्य अद्यावधिक गर्न बढी समय लिन्छ। यसले तपाईंको व्यापारलाई असर गर्न सक्दछ यदि तपाईले एकै दिनमा बनाउनु पर्ने उत्पादनको आवश्यकता पर्दछ। यो भुक्तानी विकल्पहरू जसले भुक्तानी र डेटा धोखाको कम जोखिम छ सप्लायरको जिम्मेवारी हो।
थप रूपमा, क्रेडिट कार्डहरू जस्तै अरूले प्राय: सेवा शुल्क शुल्क लिन्छन्। तपाईंले भुक्तानी विधिहरूको लागि रोज्न सक्नुहुनेछ जुन लेनदेनको कम खर्च छ। यो त्यस्ता कारणहरूका लागि हो कि तपाईंले एक आपूर्तिकर्ता चयन गर्नु पर्छ जसले तपाइँलाई राम्रोसँग सशुल्क भुक्तान विधि प्रदान गर्दछ।
सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाई आपूर्तिकर्ताको लागि बसोबास गर्नुहुन्छ जसले वेस्टर्न युनियन, MoneyGram, Bitcoin, बैंक ट्राफिक, आदि विभिन्न भुक्तानी विकल्पहरू प्रदान गर्दछ जसले तपाइँलाई राम्रो कामका लागि छनौट गर्न अनुमति दिन्छ।
आपूर्तिकर्ताको होमपेजमा धेरै बहुमूल्य जानकारी छ जुन तपाईंले अन्तिम निर्णय गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। एक कानूनी फर्म छ छुट्याउन को लागी केहि छ र शायद तपाईं मा धेरै जानकारी दिन सक्छ हाम्रोबारे पृष्ठ। रोजगारीका कर्मचारीहरूको संख्या, कारखानाको आकार र लगानी रकम को लागी जाँच गर्नुहोस्।
एक नकली आपूर्तिकर्तालाई जानकारीको साथ सधै अर्थ छ। त्यो रातो झण्डा हो जुन तपाइँले खरिद बटन हिट गर्ने निर्णय गर्नु अघि रोक्न पर्छ।
जब स्टेरियोड्स पाउडर आपूर्तिकर्ता चयन प्रक्रिया लामो लाग्न सक्छ, सरलीकृत चरणहरू पछ्याउँदा तपाइँले समय बचत गर्न सक्नुहुनेछ। शर्टकर्ट वा कट-डाउनहरू ले तपाईले नियामक स्तरहरू भेट्नको लागि धेरै खर्च गर्न सक्नुहुनेछ, गुणस्तर स्टेरियोडहरूको लागि कडा प्रतिष्ठाको निर्माण र ग्राहकको माग बढ्दै जान सक्छ।
एक मूल्याङ्कन चरणलाई बेवास्ता गर्दै तपाइँले कम प्रदर्शन आपूर्तिकर्ताको लागि बसोबास गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै, गरीब समन्वय, कम गुणस्तरका उत्पादन, घट्दो कागजी कार्य, असफलता, दोष, आदि को सम्भावना हुन सक्छ। बिजनेस लक्ष्यहरू प्राप्त गरिन्छ जब तपाईंको आपूर्ति टोली मामिलामा गुणस्तर, मूल्य निर्धारण, र आपूर्ति कार्यक्रममा केन्द्रित हुन्छ। न केवल यसले व्यापारको बाल्यकाल सुनिश्चित गर्नेछ तर यसले तपाईलाई बिक्रि स्टेरियोड्सहरूमा अन्तिम प्रयोगकर्तालाई अझ अधिक भरोसा दिन्छ।
दायाँ आपूर्तिकर्ता चयन गर्दै, तपाईंलाई तनाव-मुक्त खरीद अनुभव दिनेछ र तपाईंलाई उत्कृष्ट सम्भावित स्टेरियोड्स पनि सहयोग गर्दछ।
प्रदायक चयन, क्रय उत्कृष्टता श्रृंखला, पीटी प्रकाशन, 1998, पृष्ठ 1-154
ई-एचआर: - आफ्नो मान्छे को प्रभावशीलता को सुधार गर्न को लागि उपयोग इंट्रानेट, पृष्ठ 185
प्रदायक मन्त्रालय, डा। आदित्य वर्मा
Boldenone Undecylenate: 8 Equipoise साइड इफेक्ट्स तपाईं बचाउन चाहानुहुन्छ 2019 कसरी6चरणहरूमा टेस्टोस्टेरोन एनाथेट होमब्रिज बनाउने